Ubuhle Bokunakekelwa Kokungcola Nobuhlanzekile - Isikhungo se-EcoTechnology
Njengomuntu othanda imfashini nobuhle, ngiyakuqonda ukuheha kwezimonyo neminye imikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu. Kodwa-ke, kusobala ukuthi kunezinkinga ezimbili eziqhakazile uma kukhulunywa ngemikhiqizo yobuhle - imfucuza abaholela kuyo nokusetshenziswa kwezithako ezingenampilo kumafomula womkhiqizo.
Ungazibuza- ngabe ayikho yini imithethonqubo okufanele ivikele lokhu? Ngenkathi i-Food and Drug Administration yenza izincomo ezinkampanini, amandla ayo avinjelwe (Ubusika). Ukwengamela ngaleyo ndlela kuwela emahlombe abenzi. Bangakhathazeka kakhulu ngenzuzo futhi babe matasa besebenzisa amasu we "greenwashing" ngenkathi begcina amafomula engenampilo (iRiccolo). Izithako nazo ziyakhathaza ngenxa yokungcola okungenzeka kube khona. Izinsimbi, ngokwesibonelo, zitholakale ezimonyweni. Zingadala ingozi njengoba zinganqwabelana emzimbeni eminyakeni edlule (IBocca et al). Yize kuliqiniso ukuthi izithako zemvelo zingadala ukungezwani komzimba nokuxhumana nedermatitis, ingozi efanayo iyasebenza kwimikhiqizo ejwayelekile (de Groot et al., Pan et al). Ubuhle obuhlanzekile ngakho-ke kuyisinqumo esingcono ngenxa yomthelela waso omuhle noma ongathathi hlangothi enhlalakahleni yomuntu.
Mhlawumbe imikhiqizo yakho oyithandayo oyithandayo nayo yenza izimangalo mayelana nokuthi amafomula abo ayingxenye noma yemvelo ngokuphelele.
"Ubuhle obuhlanzekile" bunenzuzo futhi buhlukile emikhiqizweni yobuhle ejwayelekile ngoba isebenzisa ngokuyinhloko izithako zemvelo ekwakhiweni komkhiqizo. Ukuze zihambisane nesithombe sazo esiluhlaza, izinkampani kungenzeka zisebenzise imikhuba nezinto zokwakha ezizinzile hhayi kuphela uma kukhulunywa ngomkhiqizo kodwa futhi nangokupakishwa kwawo. Lokhu kungukukhetha okuncomekayo uma ubheka ukuthi imfucuza yepulasitiki eningi ivela “kumathuluzi okufaka izicelo neziqukathi” ezisetshenziselwa izimonyo (Baczkowska). Imboni yokupakisha izimonyo ingumbhemu; ngo-2018 bekufanele u- $ 25.9 billion (Drobac et al). I-akhawunti yeplastiki ingaphezulu kwesigamu semboni yokupakisha eshiwoyo (Drobac et al). Ukutholakala kwepulasitiki elahlwayo kuyinkinga uma kukhulunywa ngobuhle njengoba nje kuyinkinga uma kukhulunywa ngeminye imikhakha njengokufakwa kokudla neziphuzo.
Ungase ube nomuzwa wokuthi la maqiniso akha ukubizelwa esenzweni. Uma kunjalo, funda ngokufunda ngezindlela ongenza ngazo ubuhle bakho buchitheke kakhulu futhi bazi ngempilo!
Thenga ithuluzi lokuhlanza ubuso eliqinile noma elibolayo. Ukuthenga Ibhulashi lobuso elifakwe kabusha i-EcoTools, noma izinto ezenziwe ngezandla ezivela ku-Etsy.
Thenga imijikelezo yendwangu kakotini evuselelekayo. Ngale ndlela, awulahli inqwaba yemijikelezo kakotini njalo lapho ususa ukwakheka kwakho. Gcina ukhumbula ukuthi ukotini ubuye ube yinto engasebenzi ngendlela eyisimanga ukukhiqiza.
Naka izithako ezisesikhunjeni sakho sokunakekela isikhumba esibukeka kangcono nempilo eyandisiwe. Bheka i- Isikhumba esijulile se-Environmental Working Group database futhi ufunde kabanzi mayelana nezithako ezingena kumikhiqizo oyifinyelelayo.
Faka izinwele zakho kumquba noma uzinikele kumaphrojekthi afana ne- I-Clean Wave Programme evela ku-Matter of Trust. Lolu hlelo luqoqa izinwele nemicu yokusetshenziswa ezintweni ezinjenge-booms ezisetshenziswa ngesikhathi kuchitheka uwoyela.
Esikhundleni sebhulashi lezinwele lepulasitiki, khetha u-bamboo.
Thenga ama-shampoo wesithako esincane kanye nama-conditioner bese uvuselela noma yikuphi ukupakisha uma ususebenzise izinto.
Khetha i-shampoo eqinile nemigoqo yokupholisa kunamabhodlela epulasitiki womkhiqizo ketshezi.
Isinyathelo sokuqala nesibaluleke kakhulu ekwehliseni inani lemfucuza ehlobene nezimonyo oyenzayo ukugwema ukuthenga izimonyo eziningi. Ungonga imali ngokungathengi ngokungacabangi noma nini lapho kukhona ukuthengisa. Esikhundleni salokho, thenga kuphela into uma uyidinga bese uyisebenzisa ize iqede ngokuphelele.
Ngemuva kokuphothula imikhiqizo, bona ukuthi ungakwazi yini ukuphinda usebenzise kabusha ukupakisha kwabo ngezinhlelo nezinhlangano ezifana nazo TerraCycle.
Uma une-eyeshadow endala, ephelelwe yisikhathi, cabanga ukwenza iphrojekthi yobuciko ngayo futhi uyisebenzisele ukudweba.
Bona ukuthi ngabe kukhona yini izinketho ongazisebenzisa ongazisebenzisa, njengoba izinhlobo zobuhle bezilokhu zisebenzisa le nketho emuva kwesikhathi (Coelho et al).
Bheka imikhiqizo usebenzisa ukupakisha okubolayo okubolayo, okwenziwe ngamakhemikhali noma okusetshenzisiwe kabusha.
Uma kuziwa ekunciphiseni izimonyo ezinezithako ezingaba nobungozi, kungahle kube khona isigaba sobuhle obuhlanzekile esitolo osithenga kuso ongabonisana naso.
Izimonyo ze-DIY ezilula ezisebenzisa izithako zemvelo kungenye indlela.
Noma ngabe sibheka ukunakekela isikhumba, ukucheba izinwele, noma ukwakheka, imboni yezimonyo kumele ibhekane nokukhiqizwa kwayo kwezinto zokunakekela ezingenampilo emzimbeni womuntu nakuMhlaba. Ngezinguquko ezilula neziqondile, ungaba nezwi futhi uxhase ushintsho lube ngcono!